कांग्रेस अझै अन्योलमा किन ? – Pkr Dainik – A complete Nepali News Portal कांग्रेस अझै अन्योलमा किन ? – Pkr Dainik – A complete Nepali News Portal
पिकेआर दैनिक3महिना अगाडी प्रकाशित भएको 56 पटक पढिएको
सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले कांग्रेस जनतामा जान तयार रहेको बताएका छन् । पार्टीको ललितपुर महानगर, कागेश्वरी मनहरा नगर र टोखा नगर कमिटीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा महतले कांग्रेस चुनावबाट भाग्न नसक्ने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए डेढ वर्षपछि र नभए आगामी वैशाखमै निर्वाचन हुने जनाउँदै महतले निर्वाचनको तयारीमा पार्टी होमिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘हामी जनताको अनुमोदन लिएर मात्रै सत्तामा जाने हो, जनता नै सर्वोपरी हो, जनतामा जान तयार छौं,’ उनले भने । उनले अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सदर गरे पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान वैशाखमा निर्वाचन गराउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताए । ‘वैशाखमा निर्वाचन नगरेर आलटाल गर्‍यो भने देशभर आन्दोलनको आँधीबेहरी आउँछ, त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकार रहँदैन,’ उनले भने ।
राजधानीमै आयोजित सभामा नेता गगन थापाले अदालतलाई विवेक पुर्‍याउन आग्रह गरे । ‘अदालतले विवेक पुर्‍याउँछ, संसद् पुनःस्थापना पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई घर फर्काइन्छ ।’ एउटा व्यक्तिको सनकले मुलुकमा आगो लगाएका बेला कांग्रेसले विवेक नपुर्‍याए मुलुक अन्धकारको सुरुङभित्र फस्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो र अदालतको बलले संसद् पुनःस्थापना हुन्छ । त्यसपछि सबै चाँजोपाँजो मिल्छ, अहिले खुद्रामसिना कुरामा नलागौं ।’
मध्यपुर थिमिमा आयोजित सभामा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाबको भाषा नबोल्न आग्रह गरे ।